Vahiny noraisin’ny Filohan’ny Antenimierampirenena teto amin’ny Lapan’i Tsimbazaza - Assemblée Nationale
Accueil » Uncategorized » Vahiny noraisin’ny Filohan’ny Antenimierampirenena teto amin’ny Lapan’i Tsimbazaza
Publié le 4 February 2015
Vahiny roa sosona no noraisin’ny Filohan’ny Antenimierampirenena – Atoa Jean Max RAKOTOMAMONJY, teto amin’ny Lapan’i Tsimbazaza ny Alatsinainy faha-02 febroary 2015 folakandro.
Tamin’ny 04 ora folakandro dia nihaona taminy ny Ambasadaoron’I Cuba miandraikitra an’i Madagasikara izay monina any Kenya – SEM Paul Rodriguez Ramos.
Mandalo eto Madagasikara ity Ambasadaoro ity ka izao tonga nanao fitsidihana ara-pomba ofisialy eto amin’ny Antenimierampirenena izao.
Niarahaba sy nisaotra ary nirary soa ho an’ny Ambasadaoro ny Filohan’ny Antenimierampirenena noho izao famangiany izao.
Nivoitra tamin’ny dinika nataon’ny roa tonta nt fanamafisana hatrany ny fiaraha-miasa eo amin’I Madagasikara sy Cuba.
Tamin’ny 05 ora sy sasany kosa dia tonga nidinika tamin’ny Filohan’ny Antenimierampirenena ny delegasiona Sinoa nahitana mpikambana 04 mianadahy notarihan-dRtoa Lu Zhen Zhen – Filohan’ny “China Africa General Association”.
Nambaran’ny Filohan’ny Antenimierampirenena fa efa miverina amin’ny ara-dalàna i Madagasikara, noho izany efa mihamari-toerana ny sehatra rehetra. Mba hampandroso ny toe-karenan’i Madagasikara dia ilaina ny mpampiasa vola, hoy izy. Nohamafisin’ny Filoha ihany koa fa i Chine dia nanohana hatrany an’I Madagasikara, noho izany dia tsara raha hamafisina ny fiaraha-miasan’ny Firenena roa tonta.
Nandritra ireo fandraisam-bahiny roa ireo dia nanotrona ny Filohan’ny Antenimierampirenena hatrany ny Filoha Lefitra isany Rtoa RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina, Atoa ANDRIANARIVO Harimampianina Razakarivelo ary Atoa MAHAZOASY Mananjara Freddie. Ireo Vahiny roa ireo moa dia samy nanolotra mari-pahatsiarovana ho an’Atoa Jean Max RAKOTOMAMONJY avokoa.
Ny Talata faha- 03 febroary 2015, tamin’ny 09 ora sy sasany maraina dia noraisin’ny Filohan’ny Antenimierampirenena teto amin’ny Lapan’I Tsimbazaza Atoa Angel Villa Hernandes – Directeur de la Division Sub – Saharienne du Ministère des Affaires Etrangères Cubain.
Nitondra ny fiarahabana sy firariantsoa ho an’ny Filohan’ny Antenimierampirenena avy amin’ny Filoham-pirenena Cubain ity Vahiny ity. Nambarany ihany koa fa amin’izao fotoana izao, Cuba dia miroso amin’ny fampandrosoana haingana ny lafiny ara-toe-karena ka izany indrindra no hanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’I Madagasikara sy Cuba.
Nanolotra mari-pahatsiarovana ho an’ny Filohan’ny Antenimierampirenena koa ity vahiny ity.
Nanotrona ny Filohan’ny Antenimiermpirenena tamin’izao fandraisam-bahiny izao ny Filohan’ny Vaomieran’ny Raharaham-bahiny – Atoa RAVAHIMANANA Guillaume.
Tao aorian’ny Fihaonan’ity Vahiny ity tamin’ny Filohan’ny Antenimierampirenena dia niara-nidinika tamin’ny Vaomieran’ny Raharaham-bahiny tao amin’ny efitrano BP eto amin’ny Lapan’i Tsimbazaza ny tenany.
Nivoitra tamin’izany dinika izany ny hananganana ny Vondrona Parlemantera Madagascar –Cuba. Izany no atao dia ho fanamafisana hatrany ny fiaraha-miasan’ny tany roa tonta ozay efa nisy hatramin’izay eo amin’ny lafiny rehetra.
Mots clefs: Ambassadeur, Relations diplomatiques